गोपनीयता नीति - कक्षा
अधिकार & कानुन
सहायता शरणार्थी र आप्रवासियों
टगल मेनु USAHello कक्षा
यो गुगल अनुवाद हो र त्रुटिहरू हुन सक्छ। हामी व्यावसायिक अनुवादमा काम गर्दैछौं।
USAHello तपाइँको गोपनीयता को सम्मान गर्दछ.
तपाईं कुनै पनि समयमा हामीलाई कुनै पनि भविष्यमा सम्पर्क बाहिर निस्कन सक्छ. तपाईं हामीलाई सम्पर्क गरेर कुनै पनि समयमा निम्न गर्न सक्नुहुन्छ: [email protected].
जहाँ हामी संवेदनशील जानकारी सङ्कलन (जस्तै क्रेडिट कार्ड डाटा रूपमा), जानकारी सुरक्षित तरिका हामीलाई गुप्तिकरण गरिएको र प्रसारित छ. तपाईं ठेगाना बारमा लक प्रतिमा खोज्दै र खोजेर यसलाई प्रमाणित गर्न सक्नुहुनेछ “https” वेब पृष्ठको ठेगानाको सुरूमा.
तपाईं कुनै पनि प्रश्न छ वा यदि लाग्छ भने हामी यस गोपनीयता नीति पालन छैन, तपाईं मा इमेल मार्फत तुरुन्तै हामीलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ: [email protected].
तपाईंले यो साइट हेर्ने भाषा माथिपट्टी रहेको पहेंलो बटन प्रयोग गरी परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ ।
तपाईंलाई प्रतिलिपि गर्न र पुनः वितरण गर्न स्वागत छ USAHello रचनात्मक कमन्स इजाजतपत्र अन्तर्गत सामग्री CC BY-NC-SA 4.0